Ngicabanga eziningi ujwayelene isimo, uma uthenga esitolo imbali enhle, zama ukunakekela, kuthi kungazelelwe efa. Ngokuvamile lokhu kungenxa yokuthi izitshalo eziningi ezinhle zidinga ukunakekelwa okukhethekile, okuyiwona nabathengisi uthula. Ukuze kungabi kulesi simo futhi akufanele ulahle imali phansi abakhwabanisi, kungcono okokuqala ukhethe sikhule houseplants undemanding.
Kungcono ukuzizwa edolobheni efulethini amaSucculents ahlukahlukene. Leli gama alibhekiseli iqembu izitshalo, futhi linikeza igama izici ezibangela ubunye, kwakheka Yiqiniso yokuziphendukela kwemvelo ngokuqondene izimo ezinzima sokukhula. Sinenkosi amahlamvu enamandla kakhulu, okuyinto buthelela esiningi umswakama. Ngaphezu kwalokho, ezinye amnandi sifanamsindvo kuthiwa ribbed. Lesi sici sikusiza ukuba lingaqhekeki phezu esimweni umswakama ngokweqile.
Ngokuvamile, ngokuvumelana inqubo lithathelwe enqabayo izimo amaSucculents zifana kakhulu Cacti. Futhi labo nabanye zidinga ngempela ukuthambisa ezingavamile. Engingakusho nje ukukhumbula ngazo ehlobo kanye ngesonto ebusika hhayi izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ngenyanga. Into kuphela edinga lezi houseplants undemanding - ezingeni eyanele sokukhanyisa.
Imibala angadingi ukunakekelwa okukhethekile, kakhulu. Iningi amasayithi for balimi amateur bewuhlathulule houseplants eyanele undemanding, nesithombe bagcwalisa Inthanethi.
Ummeleli ezithakazelisayo eminye imibala angadingi yesondlo abalulekile, kuyinto Zamioculcas. Bhidlizani leli isitshalo cishe kungenakwenzeka. Uma ukhohlwa ngokuphelele ngalo, ungawujikijeli amahlamvu imbali, esaziwa umswakama reserve ku petioles. Lapho ngaye ukhumbule Zamioculcas futhi pha aphethe amagatsha nenhle. By the way, ngaphezu igama okulula le mbali - isihlahla dollar.
Esinye isitshalo, ngokuletha enkolelweni zezimali inhlalakahle, kuyinto isihlahla imali, noma Crassula. Into kuphela edinga le mbali iyinhle kangaka ukukhanya okwanele kanye ukuthambisa ngokulinganisela. Uma uthanda Jade, kungaba sikhule ukuze osayizi Amazing.
Sansevieriya noma Teschin ulimi Liyindawo amelana ongaphakeme amazinga ukukhanya, okusalungiswa nesomiso. Into kuphela ukuthi kungaba yingozi ezithinta inhlalakahle yayo, kuba ngokweqile umswakama kanye okushisa aphansi.
Kubalulekile ukulandela imithetho embalwa ukuthi kuzokusiza ukuqinisekisa ukuthi noma yimuphi
houseplants undemanding wakhula ngempumelelo:
Emva kokuthenga kuyadingeka ukulinda ekupheleni izimbali, ngemuva kwalokho imbali utshalwe enhlabathini entsha. Kubalulekile ukuba ayothatha potting umhlabathi, okuhambelana uhlobo isitshalo.
Akubalulekile nisela houseplants undemanding distilled noma ehlungiwe amanzi ukuthi ayiqukethe izakhi mkhondo ewusizo. Kungcono ngalezi zinhloso ukusebenzisa ukuvikela amanzi empompini.
Uma kwenzeka udinga ukuthutha isitshalo ebusika, kubalulekile ukuze wenze isiqiniseko sokuthi hhayi supercool ke.
Uzokhetha eminye imibala ekhaya - lena kuphela kuyigxathu. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi konke, ngisho houseplants undemanding kakhulu zidinga yesondlo ubuncane.
Indawo yasendle: Kennel "South". Ukutshala nokudayiswa ezihlukahlukene zezihlahla nezimbali
Hhayi ezinesihlungu ewusizo black nightshade
Garden Var: zokupheka
Ukuthuthukiswa ingane lapho izingane ziqala ukugcina ikhanda lakho
Njengoba isimemezelo uthando nsizwa, uma wesaba? Futhi bona ukuthi uthando kuqala?
Vera uBrezhnev ngaphandle ukwakheka ne-Photoshop: isithombe avela kuye lo oculayo
Indlela Yokwenza Rokeach "orientation Value": ngobuhle nangobubi bawo
Izidakamizwa "Theraflu" ngesikhathi sokukhulelwa
Indawo eyingqayizivele ukuze uhlale - emzini Saki. Lapha kulapho nokuthi iziphi izici zayo?